Macluumaad laga yaabo inaad markii ugu horeyso maqasho oo ku saabsan filimkii Jahada Hollywoodka badalay ee The Terminator. – Filimside.net
Macluumaad laga yaabo inaad markii ugu horeyso maqasho oo ku saabsan filimkii Jahada Hollywoodka badalay ee The Terminator.
Filimka The Terminator oo ah taxane qeybo badan leh waxaa aktar ka ah aktarka caanka ah Arnold Schwarzenegger waana filim Khiyaali saynis lagu dhisay misna Action ah.
=Filimkaan waa mid kamid ah filimada ugu muhiimsanaa ee abid Hollywoodka sameeyeen waayo wuxuu hormuud u noqday isbadalka dhinac kasta ee Hollywoodka sameeyeen tan iyo markuu soo baxayna qaabkii filimada Hollywooda gabi ahaanba wuu is badalay waxkasta sidii hore masii ahaanin.
=James Cameron waa Directedka filimka sidoo kalana ah qoraaga sheekada laakiin waxaa xaqiiqo ah in sheekada Filimkaan uu ku iibiyay kaliya 1 dolar mareykan ah.
=James Cameron oo ah qoraagii sheekada Filimkii weynaa ee Tittanic ayaa sheekada filimka The Terminator ku iibiyay kaliya 1 dollar balse waxaa heshiiska ku jiray inuu saami ka helaayo markii sheekada filim laga sameeyo inuu saamiga lacagta soo baxdo qeyb ka helaayo taasoo cadeyneyso siduu sheekada filimka ugu kalsoonaa.
=Aktarka Billy Idol ayaa qorshaha koowaad ahaa inuu jilo doorka Machineka laadarka ah filimka ee T100 hase yeeshee waxaa doorkaas calaf u helay Roberto Patrick.
=Arnold Schwarzenegger markii hore kuma qanacsaneen inuu matalo doorka Machine T800 wuxuuna ka cabsi qabay in doorkiisa jamaahiirta ka heli waayaan hase yeeshee waxaa doorkkaas ku qanciyay Directed James Cameron wuxuuna noqday mid Clasic ah.
=Arnold Schwarzenegger inkastoo uu aalad dilaa yahay hadana filimka The Terminator hal qof xitaa kuma dilaayo dhamaan dadka uu xabada ku dhufto wey dhaawacmayaan.
=Filimkaan wuxuu ku guuleystay afar abaal marin oo jaaisada caalamiga ah ee Oscar.
=Miisaaniyadii ama kharashkii ku baxay filimka The Terminator waxay aheyd midi ugu badneyd ee Filim Hollywood waqtigaas lagu sameeyay waxaana ku baxday lacag kabadan 102 Million dollar iyadoona usii dheertahay waqtiga uu soobaxay oo ah 1991dii saas oo ay tahayna filimkaan lacagtii la galiyay mid aad uga badan ayuu keenay guulo taariikhi ahna wuu gaaray.
=Filimka dhamaadkiisa waa la badalay, qorshaha markii hore wuxuu ahaa in markii laga takhaluso aalada T1000 uu John Conner uu mustaqbalka si nabad galyo ku salaamo hase yeeshee si qeyb kale loogu sii gogol xaaro ayaa dhamaadkaasi loo badalay sidaan dhamaadkii aragnayba.
=Arnold Schwarzenegger filimkaan halkii eray ee uu ku dhawaaqaba wuxuu ku qaadanayay 21,000 oo dollar iyadoo erayada uu filimkaan ku dhawaaqay ay ahaayeen 700 oo eray kaliya sidaas owgeed wuxuu filimkaan ku sameeyay lacag dhan 15 Million dollar.